Ny asa lehibe indrindra ety an-tany
Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Lioka 19:10
Izay mino an'i Kristy ho Mpamonjy ny tenany manokana dia manolo-tena ho an'Andriamanitra mba ho madio sy masina, mpiara-miasa ara-panahy mitady ny very, na lehibe io na kely, na manan-karena io na ory, na voafatotra io na olona afaka. Ny asa lehibe indrindra ety an-tany dia hitady sy hamonjy ny very, izay novidin'i Kristy tamin'ny vidiny tsy misy fetra, dia ny rany. Tokony hanao, asa fanompoana mavitrika ny rehetra ary raha ireo izay notahina tamin'ny fahazavana no tsy mizara fahazavana amin'ny hafa, dia tsy hahazo ny fahasoavana sarobidy izay narotsaka taminy izy ireo, satria nanao an-tsirambina ny adidy masina nambara mazava tao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Rehefa mihena ny fahazavan'ilay olona tsy mahatoky dia ny fanahiny ihany no very; ary ireo izay tokony ho maha-fahazavana mamiratra azy no zary tsy nahazo ny asa izay irin'Andriamanitra ho azony tamin'ny alalan'ny olombelona fitaovana. Noho izany dia tsy tafaverina ao am-bala ilay ondry nania.
Miankina aminao, olombelona fitaovana Andriamanitra mba hahatontosa ny adidinao araka izay fara herinao, ary Izy mihitsy no hanome fahombiazana. Raha ny fitaovana olombelona no miara-miasa amin'ireo anjelin'ny lanitra dia fanahy an'arivony no voaavotra. Hanome ireo mpiara-miasa mahafatra-po fahitana an'i Jesôsy izay hahatonga azy ireo ho afaka hiatrika zava-tsarotra ny Fanahy masina, izay manandratra sy mampahery azy ireo ary manao azy ireo mihoatra noho ny mpandresy. Rehefa ny roa na telo no mivory hiray fo ary handefa ny fangatahany, dia ho azy ireo ity teny fikasana ity: "Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia habita hianareo; dondony, dia hovohana hianareo" - Lio. 11:9. "Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka aminy?" -and.13. Nampanantena ny Tompo fa izay hiangonan'ny roa na telo amin'ny anarany dia eo afovoany Izy. Ireo izay mivory hivavaka, dia handray hosotra avy amin'Ilay Masina.